Fifidianana filoham-pirenena: Tazomina ho 50 tapitrisa Ariary ny “caution” arotsaky ny kandida
Nanazava ny mpitondratenin’ny CENI, Rakotondazaka Fano fa ny fanatanterahana ny fifidianana mialoha ny fotoana no antony nitazomana ho 50 tapitrisa Ariary, toy ny tamin’ny 2013, ny fandraisana anjara ara-bola amin’ny fanotàna ny bileta arotsaky ny kandida isanisany amin’ny fifidianana filoham-pirenena.
Nambarany ihany koa fa hiampy 5.000 isa eo ny birao fandatsaham-bato, ho fampiharana ny voalazan’ny andininy faha-125 amin’ny lalàna fehizoro 2018-008 tamin’ny 11 mey 2018 fa tsy tokony hihoatra ny 700 ny isan’ny mpifidy voasoratra anarana ao amin’ny birao fandatsaham-bato iray.
Araka ny efa nampahafantarin’ny praiminisitra Ntsay Christian dia hotanterahina ny 7 novambra 2018 ny fihodinana voalohany amin’ny fifidianana filoham-pirenena, ary ny 19 desambra 2018 kosa ny fihodinana faharoa.
Hiroso amin’ny fampahafantarana ireo lalàna fehizoro hifehy ny fifidianana ho avy ny CENI manomboka amin’ny herinandro ho avy io.
Mitohy izany ny fanitsakitsahana ny didy navoakan'ny HCC milaza fa anjaran'ny fanjakana no miandraikitra ny fifidianana fa tsy ny kandida no ampandoavina caution mitentina karama 300 volana ho an'ny mpiasa mikarama farany ambany indrindra.